သင့်အတွက် မနက်ဖြန်: ကွန်ပျုတာ အထွေထွေ အကြောင်းအရာများ
ကွန်ပျုတာ အထွေထွေ အကြောင်းအရာများ
၁) Operating Systems အသုံးပြုခြင်းစစ်တမ်း (System Software)
၂) Browsers အသုံးပြုခြင်းစစ်တမ်း (Software/ Browsers)
၃) Modem (Hardware)
၄) Internet Protocol (Internet)
၅) မြန်မာဖေါင့်နှင့် MS Office အခက်အခဲများ (Software)
၆)File Hippoမှ အလွယ်တကူ အရံသင့် Softwareများ ရယူရန် (Browsers)
၇) Ccleaner အသုံးပြုခြင်း (Software)
၈) Spybotနဲ့ Spywareများကို အသေထုရအောင် (Software)
၉) WinPatrol ဖြင့် မသင်္ကာဖွယ်ရာများ ဖယ်ရှားရအောင်လား (Software)
၁၀) Windows XP Vs Windows Vista (System Software)
၁၁) Blogger Background Imagae (Blogging)
၁၂) Blogger Background Colors (Blogging)
၁၃) Removing Navigator Bar from Blogger (Blogging)
၁၄) Add Webpage Visitors in Blogger (Blogging)
၁၅) အဖြူရောင်သံစဉ် ရေဒီယိုအား Bloggerထဲတွင် ထည့်ရအောင် (Blogging)
၁၆) Run Command ဖြင့် programများ ဖွင့်ကြရအောင် (Software)
၁၇) About Software (Software)
၁၈) Windows သမိုင်းကြောင်း - Screenshots - (System Software)
၁၉) Babylon . English - Myanmar Dictionary - (Software)
၂၀) Delete one of two Operating Systems - (System Software)
၂၁) Net Send ဖြင့် Messageပို့မယ် - (Software)
၂၂) ချစ်စရာမကောင်းသည့် Love Virus
၂၃) Computer Restart ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများ
၂၄) Original Memory Carများကိုသာ အသုံးပြုသင့်
၂၅) Camera Iconဖြစ်ပေါ်ပြီး ကွန်ပျုတာကို ထိခိုက်နှောင့်ယှက်သော ဗိုင်းရပ်တစ်မျိုး
၂၆) NetMeeting အကြောင်း တစေ့တစောင်း
၂၇) Statistic Widget for blogger
၂၈) Setup Home or Small Office Network
၂၉) Net Send in XP
၃၁) Times of Release of Operating Systems (Windows and Software)
၃၂) Let's Add Snow effect in your Blog (Blogging)
၃၃) To show/ Hide Drive Letters in Vista and Windows7(Windows)
၃၄) Books Hive - English, Myanmar Ebooks Library (Internet)
၃၅) Window Defrag does not complete (Windows)
၃၆) How to create PDF file (Software)
၃၇) Adding Favorites to Start Menu (Windows)
၃၈) How to turn on Conten Advisor and set rating levels (Internet)
၃၉) How to delete IE Content Advisor password (Internet)
၄၀) How to Post Embed PDF file in Blogger (Blogging)
၄၁) သင်၏ Blog Titleအား Scroll လုပ်နည်း (Blogging)
၄၂) HTML Codeအား Blogger Post တွင် ပေါ်စေရန် (Blogging)
၄၃) "Read More" in Blogger (Expandable Posts) (Blogging)
၄၄) ဓါတ်ပုံတွေကို Tableဆောက်၍ တင်မယ် (Blogging)
၄၅) Post တွေကို PDFနဲ့ Saveလို့ရတဲ့ Buttonလေးထည့်မယ် (Blogging)
၄၆) Related Posts or Related Articles ထည့်မယ် (Blogging)
၄၇) Recent Posts Widgetထည့်မယ် (Blogging)
၄၈) Recent Posts With Thumbnail Widget ထည့်မယ် (Blogging)
၄၉) MyMyanmar Unicode System - The Second Generation (Windows and Software)
၅၀) Missing Language Barကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲ? (Windows and Software)
၅၁) Linkတွေကို Drop Down Menu Listဖြင့်ဖော်ပြမယ် (Blogging)
၅၂) Local Disk C/Dကို Double-clickဖြင့် ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်၍မရခြင်း (Blogging)
၅၃) Post Titleရှေ့ မှာ Animated Image/ Logoထည့်မယ် (Blogging)
၅၄) Blog Postထဲမှာ Smiley Icon ထည့်ရအောင် (Blogging)
၅၅) Blog Postတွင် Embeddable Code ထည့်စို့ (Blogging)
၅၆) Favicon ဆိုတာဘာလဲ? ဒါကို Blogထဲမှာ ဘယ်လိုထည့်မှာလဲ? (Blogging)
၅၇) English - မြန်မာ အဘိဓါန်ပါ။ (Electronic SpreadSheet)
၅၈) Newer Posts - Home - Older Posts၌ Animated ပုံထည့်စို့ (Blogging)
၅၉) ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ရှိရှိသမျှ ဆော့ဝဲ၊ ဂိမ်းနဲ့ဖိုင်အမျိုးမျိုး ဒီမှာအလကားရမယ် (Download)
၆၀) Alert Message and Dialog Box အား Bloggerဖွင့်တိုင်း ပေါ်စေလိုက (Blogging)
၆၁) Blog Postများအား Right-clickလုပ်ပြီး ကူးယူ၍ မရအောင် ကန့်သတ်လိုပါက (Blogging)
၆၂) Desktop Iconကို Transparent ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်မယ်။ (Windows and Software)
၆၃) မိမိ၏ Folderအား တခြား Userဖွင့်၍မရအောင် Privateလုပ်ထားမယ်။ (Windows and Software)
၆၄) Remove shortcut arrow from desktop icons
၆၅) How to Install the Netbeui Protocol onaXP-Based ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
၆၆) Scroll Bar/ Boxဖြင့် Bloggerတွင် Postတင်မယ်
၆၇) သင်၏Blog URLအား Search Engineတင်ပို့လိုပါသလား
၆၈) Blog Pageတွင် အပေါ်တက်ရန် (သို့) Back toTop Botton ထည့်လိုပါက
၆၉) Adding Falling Star For Blogger
၇၀) Adding Falling Hearts in Blogger ထည့်ရအောင်
၇၁) Flash Animated Labels Tag Cloud ထည့်ရအောင်
၇၂) Email Me Form ထည့်သင့်ကြောင်း (Blogging)
၇၃) Star Rating ကို Postတင်တိုင်း ပေါ်စေလိုက (Blogging)
၇၄) DDOS Attacks Crush Twitter, Hobble FaceBook (သတင်း)
၇၅) မိမိ Blog၏ Blockquoteကို ပြောင်းလိုပါက
၇၆) Twitter attack to Silence Georgian Blogger (Blogging)
၇၇) Transperant Calendar ထည့်လိုပါက (Blogging)
၇၈) Blogger များသိစေရန် (Blogging)
၇၉) မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ အဘိဓါန် (Software)
၈၀) အင်္ဂလိပ် - ဗမာ - ကရင် အဘိဓါန် (Software)
၈၁) Run Boxထဲမှာ gpedit.msc ဖွင့်လို့ မရပါက (Windows)
sawaunghine on November 21, 2008 at 6:37 PM said...
အ်ှဆံင်လာဆာ်..ထီသိုဝ်ဟှေး..ယ်ုသိုင့်ထာင်ဏု ကောဝ်.မင့် ဏှ် က်ုတ၀်္ဘး ဏ်ုလုဍး္ဘး အ်ုခေါဟ်ကျံင်..ယ်ုလုဟှာ ဟှယ့်ကေ၀်.သိုင့်ထာင် လ်ုဏု ကောဝ်.မင့် ဖိုင်ယိုဝ်ဟှဝ်..ဏ်ုအ္ဘေးသာ ခႜိက်လိက်(စာခေါက်)ဏှ် ဏ်ုလေ၀်.ယောဝ်.လု(ကိုရန်အောင်)ဘ်ုလ၀့်ဖိုင်ဏ်ှဆာ်..္ဘးဆါင့်ဍေ ဆ်ုလုဖးဏှ် အ်ုဟှာင် ကေ၀်.လင်ထးဝေ့ လုက်ဆိင့်လှ်။(http://www.yanaung.net/) က်ုဖိုင့်က်ုဖိုင့်ဏှ် ဆ်ုကးဆ်ုဟှယ် အ်ှလုစယ်လ်ုမွယ်ဆေ၀်..myanmar help desk ဖိုင်ဏ်ှသီး အ်ှဝေ့လူက်ဆိင့်လှ်..။ဍုဂ်ပါင်လာဆာ်..အေဟှံင်ဍ၀် ယ်ုသီး မ်ုအင်းစ္ဘားသာဏု ဏင်မိင်ဆေ၀်..လ်ုဏု ဒိုမိင်းဖိုင် အ်ုဖင့်ခေါဟ်ဏှ် ပ်ုယင်ခါန်.အ်ုလေင့် က်ုလာင့်(slideshow)ဏှ်္ဘးမာသှေ်သိုဝ်လယ့်ဏှ် အဲုးသာဆိုင် ဏ်ုလ၀်ဖှေ်လာယ်ုဆေ၀်.ဃှဝ်..။ဍုဂ်ပါင်လာဆာ်..။